Chelsea Oo SIDDEED Ciyaartoy U Calaamadsatay Xalka Mushkiladda Ka Haysata Difaaca - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaChelsea Oo SIDDEED Ciyaartoy U Calaamadsatay Xalka Mushkiladda Ka Haysata Difaaca
Chelsea Oo SIDDEED Ciyaartoy U Calaamadsatay Xalka Mushkiladda Ka Haysata Difaaca
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa calaamadsatay siddeed ciyaartoy oo ay doonayso inay ku xalliso dhibaatada ka haysata khadka dambe ee difaaca, kaddib markii uu si xor ah u shaaciyey inuu uga tegayo Antonio Rudiger, sidoo kalena aan la hubin mustaqbalka Christensen iyo Azpilicueta oo iyagana ay qandaraasyadoodu dhamaad yihiin.
Blues oo xayiraad lagu soo rogay ayaa rajaynaysa inuu hirgalo iibsiga Todd Boehly iyo maalqabeenno ay shuraako yihiin oo £4.25 bilyan oo Gini kagala wareegaya Roman Abramovich laakiin ay jirto caqabad dhinaca dawladda ah.
UK ayaa la filayaa inay ansixiso heshiiskaas maalamaha foodda iangu soo haya, waxaanay taasi fursad u siinaysaa kooxdan inay ciyaartooyda ay doonaan soo iibsadaan, gaar ahaan difaaca oo ah meesha ay ka dhutinayaan ee xiddigihii ay ku haysteen ay ka tegayaan.
Sida uu qoray wargeyska The Telegraph, Jules Kounde iyo Josko Gvardiol ayaa ah bartilmaameedka ugu weyn ee Thomas Tuchel oo isagu barroosinka aasanaya Stamford Bridge, waxaana uu sidoo kale shiishka ku hayaa difaacyahannada Villarreal iyo Atletico Madrid ee Pau Torres iyo Jose Gimenez oo ku jira liiska siddeed ciyaartoy oo uu meel ku qortay. Laakiin labadan ciyaartoy ayaa waxa kula tartamaya Manchester United iyo Tottenham, kuwaas oo sidoo kalena xiise u muujinaya Gvardiol oo u ciyaara RB Leipzig.
Waxa kale oo uu Thomas Tuchel doonayaa inuu helo beddelka labada xiddig ee khadka dhexe ee N’Golo Kante iyo Jorginho oo min hal sano uga hadhsan yihiin waqtiga ay qandaraasyadoodu ku egyihiin, waxaanay ka fiirsanayaan inay iibiyaan si aanay qaab xor ah ugaga tegin sannad kaddib.
Waxa diiraddooda ku jira laacibka khadka dhexe uga ciyaara Monaco ee Aurelien Tcouameni iyo mishiinka West Ham United ee Declan Rice, halka uu liiskooda si lama filaan ah usoo galay Raheem Sterling oo la filayo inuu ka tago Manchester City.